जानीराख्नुस, यो हो बीपीको मेलमिलापको रहस्य ? – Sadak Media
विचार / अन्तरवार्ता विशेष समाचार
जानीराख्नुस, यो हो बीपीको मेलमिलापको रहस्य ?
राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित हुँदाहुँदै पनि यसबारे पर्याप्त अध्ययन भएको देखिँदैन। केही वर्षअघि एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा सँगै गएका एक व्यवसायिक साथीलाई मैले सोधेको थिएँ– …नेपालको इतिहासमा सन् १९७६ केका लागि महत्वपूर्ण छ?’ उनले भने, …त्यही वर्ष चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिले विश्राम पाएको थियो।’ कुरा ठीकै थियो।
वास्तवमा सन् १९७० को पहिलो पाँच वर्ष शीतयुद्ध कालका सकसपूर्ण वर्षहरु थिए। सन् १९७१ को पूर्वी पाकिस्तानको मुक्ति युद्ध (लिवरेसन वार) पछि बंगलादेश स्वतन्त्र भयो। त्यहाँ अवामी लिगका शेख मुजिवर रहमानले सत्ताको बागडोर लिए। यो लडाइँलाई कोइरालाले पनि नैतिक समर्थन तथा हतियार समेतको सहयोग गरेका थिए। तर नवोदित बंगलादेश भारत–पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वको गोटीका रुपमा प्रयोग हुन थाल्यो। यसै पृष्ठभूमिमा भारत–पाकिस्तान युद्ध भएको थियो। बीपीले यस सम्बन्धमा आफ्नो पीडा आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबेला युगाण्डामा दादा इदिअमिन्ले …कू’ गरी शक्ति हातमा लिएका थिए। उत्तर आयरल्याण्डमा बेलायती सेनाले आइरिसहरु माथि दमन गर्दै आम नरसंहार गर्न पुगेको थियो। यसलाई इतिहासमा …ब्लडी सन्डे म्यासेकर’ भनिन्छ। यसलगत्तै फिलिपिन्समा राष्ट्रपति फर्डिनान्स् मार्कोस्ले सैनिक शासनको सुरुवात् गरे।
यो अवधिमै युरोप र एसियाको बीचमा रहेको मुलुक टर्कीले साइप्रसलाई कब्जा गरी जबरजस्ती आफ्नो आधिपत्यमा ल्यायो। भारतद्वारा अनेक प्रपञ्च रची आफ्नो सानो उत्तरी छिमेकी सिक्किमलाई आफूमा विलय गर्‍यो। केही पर पूर्वी एसियामा इण्डोनेसियाले अर्को सानो मुलुक इस्ट टिमोरको त्यही हालत गर्‍यो। अमेरिकी सहयोगमा राजतन्त्रात्मक मुलुक इथियोपियाबाट राजतन्त्र हटाउने कार्यबाही पनि सुरु भयो। हटाइएका राजाको पछि हत्या गरिएको थियो। भियतनामी युद्धको समाप्तिपछि त्यहाँ संसारले युद्धको विभिषिकाको नारकीय स्वरुप पनि देख्यो। यसको छिमेकी कम्बोडियामा शक्तिराष्ट्रहरुको फोहरी उत्पादनको रुपमा माओवादी संगठन खमेरुज्ले सत्ता कब्जा गर्‍यो तथा गृह युद्धको सुरुवात् गर्‍यो। उता चिनीया क्रान्ति सम्पन्न गर्दै आएका माओत्से तुङ्ग आफ्ना बेथितिहरु तह लगाउन नपाउँदै बित्न पुगे। यो सम्पूर्ण क्षेत्र नै अस्थिरताको त्रासमा थियो। सबैका कारण बाह्य थिए। आन्तरिक कारण गौण थियो।
यहाँ के जोड्नु जरुरी छ भने जुन व्यक्तिसँग राष्ट्रवाद हुँदैन, उसले सुरक्षा नीतिको कुरा गर्दैन। नेपालको त्यस्तो परिस्थितिमा देशको सुरक्षाको कुरा गर्ने कोइराला आफू स्वयम् कति असुरक्षित थिए भनी अन्दाज मात्र गर्न सकिन्छ। वस्तुतः नेपालमा देश गलाउने वा बेचेर हिँड्नेहरु सँधै सुरक्षित रहँदै आएका छन्। सत्ता, सुविधा र प्रजातन्त्र उनीहरुलाई नै प्राप्त छ। त्यसैले नेपालका कतिपय नेताहरु तथा बीपीका आफ्नै मान्छेहरुले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई बहसमा नल्याउन सफल भएको देखिन्छ। कसैले यसलाई भारतकी तात्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको असहयोगका कारण बीपीले आफ्नो स्वदेश आगमनका लागि यस नीतिमार्फत केवल एउटा सैद्धान्तिक धरातलसम्म निर्माण गर्न खोजेका हुन् भनी (कू)तर्क गरेको पनि देखिन्छ।
त्यस्तै केहीको भनाईमा एउटा चलाख मान्छेले राजनीति गर्न सँधै सुरक्षित आवरणहरु खोज्दछ। बीपीले पनि असफलता हात लागेको आफ्नो जीन्दगीमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिमार्फत यही आवरण नै खोज्ने प्रयास गर्नुभएको थियो भन्ने मान्छेको पनि कमी छैन। त्यस्तै अपव्याख्याको क्रममा कतिपयले देशभित्रका सबै शक्तिहरु मिलेर प्रजातन्त्र जोगाउनुपर्छ, देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने नै राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति हो भनिदिएका छन्। राष्ट्रमा आएको खतराको अनुभूतिलाई उनीहरु भारत विरोधी चिन्तन मान्दछन्। अन्य कतिपयलाई लाग्दछ, हामी बीपीका हुक्के, चम्चे, भान्छे, नातेदार, ताबेदार वा सहयात्री भएका कारणले उनको सैद्धान्तिक व्याख्या हामीले मात्र गर्न सक्दछौं। बीपीका विचारहरुमा बौद्धिकता छैन भन्ने कुरा पनि आएका छन्। कसैको व्यक्तित्वलाई विनाश गर्न यस्ता राजकीय व्याख्याहरु संसारमा धेरै हेर्न पढ्न सकिन्छ।
नेपालमा विभिन्न प्रकारका सेन्सरसीपहरु बहालमा छन् भन्ने कुरा हरेक पढेलेखेको स्वतन्त्र मान्छेले बुझेको कुरा हो। त्यसैले केही मान्छेले यस्तो प्रकारको बहस गरिनै रहनेछन्। त्यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन। तर के बुझ्नु पर्दछ भने जुन परिवेशमा बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको घोषणा गर्नुभयो, त्यस परिवेशको आज पनि वस्तुगत अध्ययन गर्न सकिन्छ।
बीपीका समकक्षीहरु वा तात्कालीन विश्व मञ्चमा नाम चलेका नेताहरु जस्तो चीनका नेता माओत्से तुङ्ग, वा चाउ एन लाई, कम्बोडियाका नरोद्दोम सिंहानुक, सिंगापुरका लि क्वान यु, पाकिस्तानका याहया खान वा जुल्पि्ककार अलि भुट्टो, भारतकी इन्दिरा गान्धी, बंगलादेशका शेख मुजिवर रहमान लगायत त्यसबेलाका प्रसिद्ध अफ्रोएसियन नेताहरु – यी कसैले पनि कुनै परिस्थितिमा राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गरेका थिएनन्। ठूलासाना धेरै देशहरु आन्तरिक द्वन्द्व र बाह्य अशान्तिबाट पीडित भइरहेका थिए। तर उनीहरुको राजनीतिशास्त्रमा यो रुपमा राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा कतै परेको देखिँदैन। झन् त्यसबेलाका शक्ति राष्ट्रहरुले यसको कुरा गर्ने त प्रसंग नै थिएन। त्यसैले तात्कालीन राजनीतिको लोकरञ्जक शब्द आडम्बरको सिको गरेर बीपीले मेलमिलापको कुरा गरेको होइन। यसको आधार नेपालको आन्तरिक सुरक्षाको प्रश्न नै थियो। एउटा प्रखर चिन्तकका रुपमा नेपालले भोग्न गइरहेको परिस्थितिको राम्रो विश्लेषणका कारण बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति घोषणा गरी नेपालको सार्वभौमसत्तामा आसन्न खतराका सन्दर्भमा वहाँ कोसँग उभिनुभएको छ, प्रष्ट गर्नुभएको थियो। यो एउटा रणनीति मात्र थिएन। देशप्रतिको उत्तरदायित्व पनि थियो। यसलाई सिद्धान्तनिष्ठ (थिओराइज) बनाउन त्यसबेला पनि नेपाली कांग्रेसले आँट गरेन, आज पनि गरेको छैन।
आज बीपी कोइरालाको जन्मजयन्ती मनाउँदा एउटा कुरा राख्नै पर्ने भएको छ। राष्ट्रिय मेलमिलापको सन्दर्भमा बीपीको स्वामित्व हराएर जाने परिस्थिति भने छैन। जस्तो चौधौं वा पन्ध्रौं शताब्दिको पुनर्जागरण वा सत्रौं शताब्दिको ज्ञानोदय वा अझ भनौं भिक्टोरियन सभ्यताका शिखर व्यक्तित्वहरुको प िपश्चिमी सभ्यतामा भएको लगानी हराएको छैन नि १ यसलाई आज पनि स्कूलस्कूलमा पढिँदै र पढाइँदैछ।
त्यस्तै हामी आज अमेरिकाका नागरिक अधिकारका लडाकू मार्टिन लुथर किंग वा बेलायती साहित्यकार जर्ज अरवेलका बारेमा दुई शब्द बोल्न सक्दछौं। त्यस्तै नायिका मार्लिन मुन्रो वा अर्थशास्त्री जोन किन्स् आज पनि हरेक पढेलेखेको मान्छेले सम्भि्कन्छन्। लुई पाश्चरका बारेमा बच्चाबच्चालाई थाहा छ। त्यस्तै बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टल चर्चिल, महात्मा गान्धी वा जवाहरलाल नेहरुका बारेमा धेरैले लेख्न बोल्न सक्दछन्। यो किन सम्भव भयो भने कसैले तेरोमेरो वा जसअपजस नहेरी मेहनत गरी उनीहरुका बारेमा सही कुरा लेखिदिएका छन्।
जस्तो चर्चिलको जीवनकथा रान्डोल्फ चर्चिलले तथा गान्धीको जीवनकथा लुई फिसरले नलेखिदिएको भए राजनीतिका स्वार्थ भएकाहरुले उनीहरुको कस्तो परिचय स्थापना गराउँथे, हामी अनुमान गर्न सक्दछौं। गान्धीका बारेमा पनि दर्जनौं पुस्तक लेखिएका छन्। किन होला गान्धीका बारेमा पढ्नु पर्‍यो भने मान्छे लुई फिसरले लेखेकै “द लाइफ अफ महात्मा गान्धी” भन्ने पुस्तक खोज्न पुग्दछन्। त्यस्तै बीपीका बारेमा धेरै लेखिएका छन्। तर बीपीको व्यक्तित्व र विचारको आधिकारिक पुस्तक भनेको वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माद्वारा सम्पादित पुस्तकहरु नै हुन्। त्यसैले बीपीको सिद्धान्तमा दुविधा राख्नु जरुरी छैन। ती पुस्तकहरु रहुञ्जेलसम्म राष्ट्रिय मेलमिलापको सन्दर्भ हराउने छैन।
विपिन अधिकारी – सेटोपाटीबाट
कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तरणको लागि सर्त थप्दै, इशारामा नाच्दै एमाले
तरुण दलका अध्यक्ष चिन्तित, छोरामाथि भयो खुकुरी प्रहार